अन्य हेरचाह - नि: शुल्क गर्भावस्था परीक्षण, परिवार योजना जन्म नियन्त्रण, फ्लू
हामी एक समर्थक-छनौट परिवार, स्त्री रोग र प्रसूति विज्ञान, बहुभाषी, सामुदायिक उन्मुख मेडिकल सेन्टर हो जसले स्वास्थ्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्दछ अन्य हेरचाह सहित तपाईलाई कल्याण प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी एक सस्तो निजी भुक्तान शुल्क साथै धेरै बीमामा व्यावसायिक र गोपनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दछौं। हाम्रा सबै बिरामीहरूले हाम्रा स्टाफले प्रदान गरेको प्रजनन र पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाको वर्षहरूमा लाभ उठाउनेछन्।
दया, शिष्टाचार, समझ र सम्मान हाम्रो बिरामी-कर्मचारी सम्बन्ध को आधारशिला हो।
पंजीकृत नर्सहरू, LPNs, बिरामी शिक्षकहरू, प्रशासकहरू र बोर्ड-प्रमाणित पुरुष र महिला गाईन्कोलॉजिष्टहरूको हाम्रो स्टाफ प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा विशेषज्ञ छन्। हाम्रो स्टाफ बहुभाषी र बहु ​​सांस्कृतिक छ।
नि: शुल्क गर्भावस्था परीक्षण
फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टरमा हामी गर्भावस्था परीक्षणको प्रस्ताव गर्दछौं
निःशुल्क पेशाब गर्भावस्था हार्मोन hCG परीक्षण। तपाईं प्रतीक्षा गर्दा परिणामहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
रगत गर्भावस्था परीक्षणको लागि सानो शुल्क। परिणाम २ दिनमा फिर्ता।
$ १ private ० निजी भुक्तान शुल्क वा सोनोग्रामको लागि बीमा प्रयोग गर्नुहोस्।
भेटघाटहरूको सराहना गरियो, तर तपाईंलाई अपोइन्टमेन्ट बिना नै पैदल-भित्रि स्वागत छ।
सबै यौन झुकाव र लि gender्ग अभिव्यक्तिको बिरामीहरू हाम्रो गुणस्तर स्वास्थ्य सेवामा स्वागत छ।
कसरी गर्भावस्था पत्ता लगाउन सकिन्छ? - अवधारणा पछि to देखि १० दिन सम्म (तपाईंको अन्तिम अवधिको7हप्ता भन्दा बढी पछि), एक मूत्र गर्भावस्था परीक्षण (c० भन्दा माथिको एचसीजी स्तर) पढ्न सक्छ तर सोनोग्रामले गर्भावस्था नदेखाउन सक्छ।
परिवार योजना र जन्म नियन्त्रण
परिवार योजना र जन्म नियन्त्रण विकल्प र विधिहरू
FCHC ले सबै उमेरका पुरुष र महिलाहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्दछ ताकि उनीहरू यौन गतिविधि बारे जिम्मेवार, सूचित निर्णय लिन सक्दछन्। यदि तपाईं यौन सक्रिय हुनुहुन्छ र गर्भवती हुन चाहनुहुन्न भने, गर्भवती हुनबाट जोगिन गर्भनिरोध प्रयोग गर्नुहोस्। सबै प्रकारको जन्म नियन्त्रणले तपाईंलाई यौन संक्रमित संक्रमणहरूबाट बचाउँदैन। तपाईका विकल्पहरू र प्रत्येक विधिका लागि जोखिमहरू सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ।
अमेरिकी प्रेस विज्ञप्ति र स्त्री रोग विशेषज्ञको क Congress्ग्रेसनमा एक ठूलो प्रकाशन छ कसरी जन्म नियन्त्रण काम गर्दछ - बिरामी शिक्षा।
नाबालिगहरूलाई उनीहरूका बाबु-आमा वा उनीहरूले विश्वास गर्ने वयस्कसँग छनौटहरू छलफल गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
यदि तपाईं जन्म नियन्त्रण विधि सुरू गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ वा केवल जानकारी चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो कर्मचारीले तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछ!
जन्म नियन्त्रण जानकारी तपाईंको क्लिनिकल सेवाहरूको लागि समावेश गरिएको छ no थप शुल्क
जन्म नियन्त्रण विधिहरू छलफल गर्न तपाईको अपोइन्टमेन्टको क्रममा तपाईको क्लिनीशियनसँग कुरा गर्नुहोस्।
तपाईं अलग जन्म जन्म विकल्प परामर्श सत्रको तालिका पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
FCHC ले विभिन्न विधिहरू प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं तुरुन्तै आफ्नो सुरक्षा सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
जन्म नियन्त्रण विधिहरूले समावेश गर्दछ:
जन्म नियन्त्रण गोलीहरु: Alesse, FemconFe, Seasonale, Loestrin, Seasonique, SUMMER, यास्मीन
नुभाआरिंग® - नुभाआरing्ग एक सानो, लचिलो योनी औंठी हो जुन गर्भावस्था रोक्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईंले यसलाई weeks हप्ताको लागि राख्नुभयो, यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस्, र पछि एक हप्तामा नयाँ राख्नुहोस्।
प्याच - ओर्थो इभ्रा - हप्ताको एक पटक जन्म नियन्त्रण प्याच। यो गोली जस्तै प्रभावकारी छ।
IUD: मिरेना - मिरेना (लेभोनोरजेस्ट्रल-रिलीजिंग इंट्रायूटरिन प्रणाली) तपाईको गर्भाशयमा राखिएको हार्मोन-रिलीजिंग आईयूडी हो तपाई5बर्ष सम्म चाहानुहुन्छ गर्भावस्था रोक्नको लागि। मिरेनाले महिलामा भारी अवधि उपचार गर्दछन् जसले अन्तर्देशीय गर्भनिरोधक छनौट गर्दछन्। वा प्यारागार्ड - परागार्डे १० बर्ष सम्मको IUD हो।
Nexplanon® - औषधि प्रत्यारोपण गर्भाधान रोक्नको लागि तपाइँको पाखुरामा जान्छ
DMPA "DEPO" ("शट") - सुरक्षित, प्रभावकारी, र सुविधाजनक इंजेक्शन योग्य जन्म नियन्त्रण
अन्य विधिहरू: चक्र मोती, प्राकृतिक चक्र ताल, कन्डमहरू
योजना बी (आपतकालीन गर्भनिरोधक) - असुरक्षित सेक्स वा जन्म नियन्त्रण विफलता पछि गर्भावस्था रोक्न मद्दत गर्दछ
मौसमी फ्लू भ्याक्सिन
फ्लू न फैलाउनुहोस् - फ्लू नफर्काउनुहोस्। एक सिजन फ्लू खोपका साथ खोप लगाउनुहोस्।
सीडीसीका अनुसार फ्लू शट 70०-90 ०% बीचमा स्वस्थ व्यक्तिहरूमा influ 65 वर्ष मुनिका लागि प्रभावकारी हुन्छ। फ्लू खोप दुई रूपमा आउँदछ, शट र नाक स्प्रे। नाक स्प्रे भनिन्छ फ्लुमिस्ट। शटको कारणले तपाई फ्लू हुने छैन। यसले तपाईंको शरीरलाई फ्लू भाइरसहरूसँग लड्न आवश्यक एन्टिबडीहरू विकास गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं शट को लागी एक हल्का प्रतिक्रिया हुन सक्छ, इंजेक्शन साइट मा पीडा सहित, हल्का मांसपेशियों को दर्द या ज्वरो सहित। फ्लुमिस्ट एक कमजोर लाइभ भाइरस खोप हो। यसको मतलब यो लाइभ भाइरसबाट बनेको हो जुन फ्लूको कारणले होइन।
स्वस्थ रहनको लागि दैनिक कार्यहरू लिनुहोस्। खोक्नुहोस् वा टिश्युमा स्निज गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग एक छैन भने, आफ्नो आस्तीन प्रयोग गर्नुहोस्, छैन तिम्रो हात। साबुन र पानीले प्रायः आफ्ना हातहरू धुनुहोस्। यदि तपाईंसँग साबुन र पानी छैन भने एक रक्सीमा आधारित हात रग प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको आँखा, नाक, र मुख नछोड्नुहोस्। कीटाणुहरू त्यस्तै फैलियो। यदि तिमी बिरामी पर्छौ भने घरमै बस्नुहोस्। यसले अरूलाई बिरामी हुनबाट बचाउँछ।
फ्लूको लक्षण फ्लू भएका व्यक्तिहरूले प्राय: केही वा यी सबै लक्षणहरू महसुस गर्दछन्।
ज्वरो * वा ज्वरो लाग्ने / चिसो महसुस
Runny या भरपूर नाक
मांसपेशिहरु वा शरीर को दुखाइ
थकान (धेरै थकित)
केही मानिसहरूलाई बान्ता र पखाला हुन सक्छ। वयस्कहरू भन्दा बच्चाहरूमा यो अधिक सामान्य छ।
* फ्लू भएका सबैलाई ज्वरो लाग्दैन।
म बिरामी पर्छु भने के गर्ने? घरमै बस! धेरै फ्लू भएका व्यक्तिहरूले डाक्टरलाई भेट्नु हुँदैन। यदि तपाई बिरामी हुनुहुन्छ र यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, दम, मधुमेह, हृदय रोग, वा फोक्सोको रोग जस्तो पुरानो स्वास्थ्य अवस्था हो वा यदि तपाईंको बच्चा years बर्ष भन्दा कम उमेरको छ वा तपाईंको उमेर565 बर्ष भन्दा बढि छ।
फ्लू रोक्नको लागि एकल उत्तम तरीका भनेको प्रत्येक वर्ष फ्लू खोप लिनु हो।
हाम्रो सन्दर्भ गर्नुहोस् शुल्क अनुसूची गर्भपात देखभाल र gynecology कल्याण सेवाहरु को मूल्यहरु को लागी।